जेठानीलाई अर्कै केटासंग लगाइदिएकी देउरानीले भनिन्, ‘मेरै कोठामा एक रात भेट गराएकी हुं ‘ – Sunaulo Nepal TV
नेपालगञ्जनवलपरासी वर्दघाट १० मा एउटा अनौठो घटना भएको छ । कल्पना सुनार केही दिन देखि हराएकी थिइन् । उनको खोजी थालियो । घर छोडेर गएको दोस्रो दिन उनका श्रीमान विदेशवाट फर्केर आए । दामोदर सुनारले विदेशवाट आएपछि श्रीमतीलाई खोजी गरेपछि उनी भारतमा फेला परिन् । उनले जे जसो भएपनि अब संगै बसौं भनेर दामोदरले श्रीमती कल्पनालाई स्वीकार गरे । उनीहरु मिलेर बसेकै थिए तर अचानक असोजमा कल्पनाले आफ्ना श्रीमानलाई कोठामा थुनेर हिडिन् ।
उनको घरमा भाडामा बस्ने मौसम सुनारलाई यो सबै घटनाका बारेमा थाहा छ उनकै कारण आफ्नी श्रीमती कल्पना फेरी हराइन् भन्ने आरोप दामोदरले लगाए । त्यसपछि उनलाई केरकार गर्दा मौसमले आफुले नै कल्पनालाई अर्कै युवकसंग चिनजान गराएको स्वीकार गरिन् । कल्पना र मौसम नाताले देउरानी जेठानी हुन् । कल्पनाको जेठानी हुन् मौसम सुनार । दामोदरले मेरो श्रीमतीलाई अर्को युवकसंग भगाउने मौसम नै हो भनेर आरोप लगाएपछि उनले त्यो कुरा पनि स्वीकार गरेकी छन् ।
कल्पनाले अब दामोदरसंग बस्न सक्दिन भन्थिन्, अर्का युवकसंग सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी पनि गर्थे, चिनजान मैले गराएको होइन मैले उनीहरुलाई भेट्न सहयोग मात्र गरेको हो, उनले भनिन् । मौसमीको कोठामै कल्पना र अर्का पुरुषसंगै भेटेको र संगै बसेको पनि मौसमीले स्वीकार गरिन् । एक पटक मेरो कोठामा आउनुभएको हो त्यसपछि के भयो मलाई थाहा छैन, उनले भनिन् ।
भिडियो हेर्न तलको 👇👇👇लिंकमा क्लिक गर्नुहोस।
Previous दशैं आउँदैछ बैंकमा पैसा निकाल्न जाँदै हुनुहुन्छ? होसियार २ मिनेट समय दिएर यो अवश्य पढ्नुस
Next टिकटकबाट करोडौं कमाए भन्नेहरुको वास्तविकता बाहिरियो। बिजय शाही जस्तै दुनियाँ झुक्याउन खोजेका हुन त ? (भिडियो हेर्नुस)